YEYINTNGE(CANADA): Thursday, November 17
ကျနော် မျှော်မိ တောင်ထိပ်ဆီသို့
ဝါဝါ ဝင်းဝင်း လူလှိုင်းဆင်းလို့
သင်္ကန်းကို အလံထူ ၊ တပ်ဦးမှာ နေရာယူ…..
၈ရက် ၈ လ ၁၉၈၈
ဘယ်သူမှ မထွက်ရဲတဲ့ အချိန်
ဘုန်းကြီး ရဟန်း နဲ့ ကျောင်းသားတစ်တွဲ
၈ ရက် ၈ လ ၁၉၉၀
ဘုန်းကြီးတွေ ကန့်ကွက် ကာ ကံဆောင်
သံဃာ ၁၇ ပါးပျံလွန် သည်အထိ
နောက်မတွန့်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စေတမန်
အများအတွက် အမြဲ အသက်ပေးလျက်…….
၂၇ ရက် ၉ လ ၂၀၀၇
ဝါဝါဝင်းဝင်း ရွှေဝါရောင် လှိုင်းတွေခင်း
ပြည်သူ့ဒုက္ခ ၊ ဒို့ဒုက္ခတဲ့
သွေးစုပ်ကောင်တွေ အတွက် ငရဲအော်သံပေါ့
ကျွန်သပေါက်သား ၊ နေပြည်တော်ဆီသွား…
ထမင်း တစ်နပ်စား ရဟန်းများ
ပြည်သူအတွက် လက်နက်ဗလာ ၊ မေတ္တာပါလျက်
မကြောက်ရေးချာ မကြောက် ၊ မတရားမှု
ဘုန်းကြီး အရိုး တောင်လိုပုံစေသော်….
အသောက မင်းကြီး လက်ထက်မှ ယနေ့တိုင် အသက်များစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့
လက်နက်မပါ မေတ္တာရှင် သူရဲကောင်း (ရဟန်းတော်များ) အတွက်
တေဇော ( ၉၆ ဗ.က.သ )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/17/20110အကြံပြုခြင်း
NLD Youth Statement - လူငယ်လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ ကြေညာချက် (၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁)
မူ​ရော၊​ လူ​ရော ​ပြောင်း​ရမှာပါ
Published on November 17, 2011 by ရွှေအောင်
မြန်မာ့​ရုပ်ရှင်မှာ ဆင်ဆာရှိသင့်​ မရှိသင့်​၊​ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ မ​နေ့​က မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​မှာ စည်း​ဝေး​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြပါတယ်။
ဗဟန်း​မြို့​နယ် ဝင်္ကပါလမ်း​က မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​မှာ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​နဲ့​ ရုပ်ရှင်​လောကသား​တွေ ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြတယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ဆွေး​နွေး​ပွဲမှာ ပါဝင်​ရောက် ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​သူတဦး​ဖြစ်တဲ့​ ဒါရိုက်တာ​မောင်မျိုး​မင်း​ (ရင်တွင်း​ဖြစ်) က​တော့​ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​ရော ဆင်ဆာအဖွဲ့​ပါ ​ပြောင်း​ပစ်ဖို့​လိုပြီလို့​ ဆိုပါတယ်။
တခြား​ကဏ္ဍ​တွေ အား​လုံး​ရွေ့​နေချိန်မှာ ရုပ်ရှင်က မ​ရွေ့​ဘူး​လို့​လည်း​ ​ပြောပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ​မောင်မျိုး​မင်း​ (ရင်တွင်း​ဖြစ်) ကို ဆက်သွယ် ​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
ကိုမျိုး​မင်း​တို့​ မ​နေ့​က ဆင်ဆာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြတယ်လို့​ သိရပါတယ်။ ကိုမျိုး​မင်း​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​တာ​လေး​ အရင် ​ပြောပြပါလား​ဗျ။
“ကျ​နော်တို့​ ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​တာ​တော့​ တခြား​ မဟုတ်ပါဘူး​။ ဘယ်ဆင်ဆာအဖွဲ့​ပဲ တက်တက် ဒါရိုက်တာ​တွေ အ​နေနဲ့​ ဇာတ်ကား​တခုခုကို ဆင်ဆာဖြတ်တယ်ဆိုရင် အပြန်အလှန် ​ဆွေး​နွေး​ခွင့်​ ရှိရမယ်။ တ​ယောက်နဲ့​ တ​ယောက် အနုပညာသမား​တောင်မှ အမြင်မတူကြဘူး​လေ။ သူ့​အမြင်နဲ့​ ကိုယ့်​အမြင်နဲ့​ မတူညီကြဘူး​ဆို​တော့​ အဲဒါကို ဘာ​ကြောင့်​ဖျက်တယ်ဆိုရင် ကျ​နော်တို့​က ဘာ​ကြောင့်​ရိုက်ထား​ရတာပါ​ပေါ့​။ အပြန်အလှန် ​ဆွေး​နွေး​ခွင့်​ ရှိရမယ်။ အဲဒါ တချက်ပါ။
“​နောက်တခုက မကြာခင် အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့​ ဥက္ကဋ္ဌ​နေရာမှာ ဖြစ်လာ​တော့​မှာဆို​တော့​ အာဆီယံနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့​ လွတ်လပ်တဲ့​ အနုပညာ စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​ ဥပ​ဒေ​တွေ ရှိသင့်​တယ်။ ဥပမာ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံကြီး​က တင်း​တင်း​ကျပ်ကျပ်​တွေ လုပ်​နေတယ်ဆိုရင် တခြား​နိုင်ငံငယ်​လေး​တွေက ဘယ်​လေး​စား​တော့​မလဲ။ အဲ့​တော့​ ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံအဖြစ် ရှိ​နေတဲ့​အချိန်က​နေစပြီး​တော့​ တခြား​ အာဆီယံနိုင်ငံ​လေး​တွေလိုပဲ လွတ်လပ်တဲ့​ စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​ ဥပ​ဒေ ချ​ပေး​သင့်​တယ်။ အဲဒါ​လေး​တွေ​ကြောင့်​မို့​ တိုင်ပင်တယ်။
“​နောက်တခုက ကျ​နော်တို့​ အနုပညာသမား​တွေ ကံကြမ္မာ၊​ ကျ​နော်တို့​အ​ပေါ်က​နေ တခုခု ရှိမ​နေ​စေချင်ဘူး​။ ကျ​နော်တို့​ အနုပညာသမား​တွေကို သူတို့​ဘာသာ သူတို့​ ဥပ​ဒေဆွဲပြီး​ ဘာမှ မတိုင်ပင်ဘဲ တင်တယ်။ သူတို့​ဘာသာ သူတို့​ လုပ်ချင်တဲ့​စနစ်​တွေကို ​ပြောင်း​ပြီး​ လုပ်​နေတဲ့​ သူ​တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါက အုပ်ချုပ်သူ​တွေ မဟုတ်ဘူး​၊​ အဲဒီ​အောက်က လူ​တွေ။ ​လော​လောဆယ်မှာ စား​လို့​ကောင်း​တဲ့​ ခွင်တည့်​နေတဲ့​သူ​တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလူ​တွေက သူတို့​နည်း​နဲ့​ သူတို့​ဘာသာ သူတို့​ ချက်ချင်း​လုပ်​နေ​တော့​ အဲဒါ​တွေက ဥပမာ ဗွီဒီယိုတချို့​ကို ကြိုတင်စနစ်နဲ့​ ဖြန့်​ရမယ်ဆိုတာ ခိုး​ကူး​ခွေ မနိုင်​သေး​ဘဲ ဖြန့်​ခိုင်း​တော့​ တနည်း​အား​ဖြင့်​ ခိုး​ကူး​ခွေနဲ့​ ရှယ်ယာ​ပေါင်း​လုပ်​နေသလား​လို့​ စဉ်း​စား​လို့​ရတယ်​လေ။ အဲလို စဉ်း​စား​သွား​လို့​ရတယ်။ အဲဒါမျိုး​ ဦး​နှောက် ရှိတဲ့​သူ​တွေက​တော့​ ဒီမှာ မရှိသင့်​ဘူး​။ ​နောက် ဆင်ဆာတဖွဲ့​လုံး​ လဲသင့်​တယ်။ ​ခေတ်အ​တွေး​အ​ခေါ်နဲ့​ flexible ဖြစ်တဲ့​သူ​တွေ လဲသင့်​တယ်။”
ဦး​မျိုး​မင်း​တို့​ အဲလို ​ဆွေး​နွေး​တော့​ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​က ဘယ်လိုပြန်ပြီး​ ​ဆွေး​နွေး​ပါလဲခင်ဗျ။
သူတို့​က လက်ခံပါတယ်။ တခါတခါကျ​တော့​ လမ်း​ကြောင်း​ ဆွဲယူရတာ ရှိတယ်​လေ။ တခြား​လမ်း​ကြောင်း​ကို ဖိ​ပေး​လိုက်တာမျိုး​တွေ ရှိတယ်။ ကျ​နော်တို့​က အဲဒီလမ်း​ကြောင်ကို ပြန်ဆွဲပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​ လိုချင်တာကို ပြန်ယူတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​ အဖွဲ့​ဝင်ဆိုတာ ​သေး​သေး​လေး​။ အဲဒီအထဲမှာ သူတို့​ အ​ကြောင်း​လည်း​ ပါပါတယ်။ ​နောက်ကွယ်မှာ အတင်း​ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ ကျ​နော်တို့​ ​ဗြောင်​ပြောကြတာပါ။ ရုပ်ရှင်အစည်း​အရုံး​က ကျ​နော်တို့​ကို ဘာမှ မလုပ်​ပေး​နိုင်ဘူး​ဆိုတာကိုလည်း​ သူတို့​ရှေ့​မှာပဲ ​ပြောပါတယ်။ ပြီး​တော့​ ရုပ်ရှင် အစည်း​အရုံး​ တခုလုံး​လည်း​ အသစ်ပြန်ဖွဲ့​ဖို့​ လိုတယ်ဆိုတာလည်း​ ​ပြောပါတယ်။ ရုပ်ရှင် ဆင်ဆာအဖွဲ့​လည်း​ ပြန်ဖွဲ့​ဖို့​လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်း​ ​ပြောပါတယ်။
အဲတော့​ သူတို့​က ဘယ်လိုမျိုး​ပြောလဲဗျ။
အဲ​တော့​ ဝန်ကြီး​ထိ တင်ပြပြီး​ လုပ်​ပေး​ပါ့​မယ်​ပေါ့​။ အဲ့​တော့​ ​သေချာ စဉ်း​စား​လိုက်တဲ့​အခါမှာ ဝန်ကြီး​ အထိ တင်ပြ​ပေါ့​ တဖက်ကလည်း​ နိုင်ငံ​တော်သမ္မတရုံး​တို့​၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ ​ကော်မရှင်တို့​ တင်ပြဖြစ်မယ်လို့​ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့​လဲဆို​တော့​ တချို့​ကိစ္စ​တွေက ဝန်ကြီး​ကို တင်ပြ​ပေး​ပါ့​မယ်ဆိုပြီး​ ​ပျောက်သွား​တဲ့​ကိစ္စ​တွေက အများ​ကြီး​ပဲ။
ဂျာနယ်​တွေမှာ သတင်း​ရေး​သား​ခွင့်​၊​ တင်ပြခွင့်​ အရင်က မဖတ်ဖူး​တဲ့​ ဖတ်ရ​လေ့​မရှိတဲ့​ သတင်း​မျိုး​တွေ၊​ သတင်း​ဆောင်း​ပါး​မျိုး​တွေ အင်တာဗျူး​တွေ ဖတ်ရ​တော့​ စာ​ပေနဲ့​ ပတ်သက်ရင် အတိုင်း​အတာ တခုထိ ဖတ်လာရတဲ့​အ​နေအထား​မှာ ရုပ်ရှင်က ဒီအတိုင်း​ပဲ ရပ်​နေတဲ့​အ​ပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
“အ​ရွေ့​မရှိဘူး​လေ။ တခြား​ကဏ္ဍ​တွေ အကုန်လုံး​ ပညာ​ရေး​၊​ ကျန်း​မာ​ရေး​၊​ စီး​ပွား​ရေး​ အား​လုံး​ ​ရွေ့​ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်က မ​ရွေ့​ဘူး​။ အကုန်လုံး​ ​ရွေ့​နေတာကို ဘာဖြစ်လို့​ တင်း​ခံ​နေတာလဲ။ ဘာအတွက် တင်း​ခံ​နေတာလဲ။ ပြီး​ရင် ဘယ်သူ​တွေက တင်း​ခံ​နေတာလဲဆိုတာ ကျ​နော်တို့​ သိဖို့​လိုပြီ။ ကျ​နော်တို့​ လိုချင်တာကို တဖြည်း​ဖြည်း​တော့​ တရား​သဖြင့်​လေး​တော့​ ဆွဲယူသွား​ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့​လဲဆို​တော့​ အဲဒီအား​လုံး​ကလည်း​ ​လျှော့​ပေါ့​ပေး​နေကြပြီ။ လက်ရှိ လူကြီး​တွေ အကုန်လုံး​ကလည်း​ ဒါ​တွေကို ထိုက်သင့်​သ​လောက် ​လျှော့​ပေါ့​နေတယ်ဆိုတာ အား​လုံး​သိတယ်။ သိ​နေတဲ့​အချိန်မှာ ​အောက်ကလူ​တွေက စား​ရတဲ့​နေရာ​လေး​ ​ပျောက်သွား​မှာ​လေ။ အဲ့​တော့​ ဒါ​တွေက သိပ်အဆင်မ​ပြေလှဘူး​လေ။”
ခြစား​နေတဲ့​သူ​တွေ ​ပြောင်း​ပစ်မှပဲ ဒီရုပ်ရှင်​လောက တိုး​တက်မယ်လို့​ ဆိုလိုတာ​ပေါ့​နော်။
မူက​တော့​ ​ပြောင်း​နေပြီလို့​ ​ပြောတယ်။ လူ​ပြောင်း​ဖို့​ လို​နေပြီ​ပေါ့​နော်။
ဟုတ်ကဲ့​။ မူ​ရော၊​ လူ​ရော ​ပြောင်း​ရမှာပါ။ တဖွဲ့​လုံး​ပြောင်း​ပြီး​ တဖွဲ့​လုံး​ အသစ်ပြန်ဖွဲ့​စည်း​ရမှာပါ။
တခြား​ ​ပြောချင်တာ ရှိရင်လည်း​ ​ပြောလို့​ရပါတယ်။
“အခုလို ​မေး​တာက ကျ​နော်တို့​ကို တတပ်တအား​ ပံ့​ပိုး​တယ်လို့​ ယူဆပါတယ်။ အဲ့​တော့​ ကျ​နော်တို့​ အခု ​ပြောင်း​လဲ​နေတဲ့​အချိန်မှာ ​ကောင်း​သော​ပြောင်း​လဲခြင်း​မှာ ကျ​နော်တို့​လည်း​ ​ကောင်း​ချင်တာ​လေ။ အဲ့​တော့​ ​ကောင်း​သော ​ပြောင်း​လဲခြင်း​ အတွက် ကျ​နော်တို့​ အား​လုံး​ အဆင်သင့်​ရှိပါတယ်။ တခုပဲ ရှိတယ်။ ကျ​နော်တို့​ ပညာရှင်​တွေကို အသိမ​ပေး​ဘဲ ကံကြမ္မာကို စီရင်တာမျိုး​။ ကျ​နော်တို့​ အနုပညာရှင်​တွေရဲ့​ အခွင့်​အ​ရေး​ကို လုယူခံရတာ၊​ အနိုင်ကျင့်​ခံရတာမျိုး​ ဖြစ်သလို ဒါ ဒီမိုက​ရေစီလမ်း​ကြောင်း​ကို ဆန့်​ကျင်တဲ့​ သ​ဘောမျိုး​ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုး​ မဖြစ်​အောင် ကျ​နော်တို့​ အနုပညာသမား​တွေကလည်း​ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့​ တား​ဆီး​သွား​မယ်။ ကျန်တဲ့​သူ​တွေ အား​လုံး​ကလည်း​ ကျ​နော်တို့​ကို ကူညီပံ့​ပိုး​ကြပါလို့​ ​မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ထား​ဝယ်အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန်နှင့်​ မြန်မာ့​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်မှု – အပိုင်း​ ၄
Published on November 17, 2011 by ထက်​အောင် ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန်က ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​မဟာဗျူဟာအကျိုး​စီး​ပွား
ထိုင်း​ နိုင်ငံဟာ ထား​ဝယ်​ဒေသကို ဘာဖြစ်လို့​ စိတ်ဝင်စား​ရတာလဲဆိုတဲ့​ အ​ခြေခံကျတဲ့​ ​မေး​ခွန်း​တခု ရှိ​နေပါတယ်။ အီတာလျံ-ထိုင်း​ကုမ္ပဏီရဲ့​ Marine Division က နိုင်ငံရပ်ခြား​ စီမံကိန်း​ ညှိနှိုင်း​ရေး​မှူး​ Sirapat Trinvuthipong ရဲ့​ အ​ဖြေက​တော့​ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ ဒီလို အချက်အချာကျတဲ့​ ပထဝီအ​နေအထား​မျိုး​ မရှိလို့​ပါတဲ့​။ ဒါ့​အပြင် ဒီ​မေး​ခွန်း​အတွက် တခြား​အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ အချက်အလက်​တွေ အခိုင်အမာရှိ​နေပါတယ်။
ထား​ဝယ်​ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​စီမံကိန်း​နဲ့​ အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန်အ​ပေါ် ထိုင်း​အစိုး​ရနဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေ မျက်စိကျ​နေတဲ့​ အချက်က​တော့​ စီမံကိန်း​ရဲ့​ အဓိကကဏ္ဍကြီး​ ၃ ခုဟာ မဟာဗျူဟာကျကျ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်​နေတဲ့​အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ​တွေက​တော့​ ​ဒေသတွင်း​နဲ့​ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်​ရေး​နဲ့​ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​ (Regional and Global Trade & Logistic) ကဏ္ဍ၊​ စက်မှုဇုန်ထူ​ထောင်​ရေး​ (Industrial Establishment) ကဏ္ဍနဲ့​ ထိုကဏ္ဍနှစ်ခုလုံး​ကို ဖြည့်​ဆည်း​ပေး​မယ့်​ သဘာဝအရင်း​အမြစ်များ​ ထုတ်ယူသုံး​စွဲခြင်း​ (Natural Resource Exploitation) ကဏ္ဍတို့​ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်း​နဲ့​ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်​ရေး​နဲ့​ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​မှာ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ရဲ့​ အနာဂတ် အလား​အလာအ​ပေါ် ထိုင်း​အစိုး​ရနဲ့​ အီတာလျံ-ထိုင်း​ကုမ္ပဏီတို့​ရဲ့​ ​မျှော်မှန်း​ချက်က​တော့​ ရှင်း​ပါတယ်။ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​က တဆင့်​ မဲ​ခေါင်​ဒေသနိုင်ငံ​တွေဖြစ်တဲ့​ ထိုင်း​၊​ လာအို၊​ က​မ္ဘောဒီယား​၊​ ဗီယက်နမ်နဲ့​ တရုတ်နိုင်ငံ ​တောင်ပိုင်း​ ကုန်တွင်း​ပိတ် ယူနန်ပြည်နယ်တို့​ရဲ့​ ထွက်ကုန်​တွေကို အ​ရှေ့​အလယ်ပိုင်း​၊​ အာဖရိကနဲ့​ ဥ​ရောပတို့​ဆီကို (တ​နေ့​တခြား​ အန္တရာယ်များ​လာတဲ့​ မလက်ကာ ​ရေလက်ကြား​ကို ဖြတ်သန်း​စရာမလိုဘဲ) တင်ပို့​နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အား​ဖြင့်​ ကမ္ဘာ့​တဖက်ခြမ်း​က တင်သွင်း​ကုန်​တွေကိုလည်း​ မဲ​ခေါင်နိုင်ငံ​တွေဟာ ထား​ဝယ်​ရေနက် ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ ဆက်သွယ်ထား​တဲ့​ အာရှအ​ဝေး​ပြေး​လမ်း​ကြီး​ကတဆင့်​ သယ်​ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ​နေရာမှာ ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ အမျိုး​သား​အကျိုး​စီး​ပွား​ဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုက ဘန်​ကောက်မြို့​ကို မဲ​ခေါင်​ဒေသ ကုန်သွယ်​ရေး​နဲ့​ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​ ဗဟိုချက်အဖြစ် ​မျှော်မှန်း​ထား​ပါတယ်။ ​ဒေသတွင်း​နိုင်ငံ​တွေရဲ့​ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​ အ​ခြေခံအ​ဆောက်အုံပိုင်း​မှာ အဆင့်​အမြင့်​ဆုံး​ဖြစ်​နေတာ၊​ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​ ဝန်​ဆောင်မှုပိုင်း​မှာ ​ခေတ်မီ​နေတာ၊​ ကမ္ဘာနဲ့​ချိတ်ဆက်ထား​နိုင်တဲ့​ ခိုင်မာတဲ့​ဈေး​ကွက်ရှိ​နေတာနဲ့​ မြန်မာ၊​ လာအို၊​ က​မ္ဘောဒီး​ယား​နဲ့​ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့​မှ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေး​လမ်း​ကြောင်း​များ​ရဲ့​ ဆုံမှတ်ဖြစ်​နေတာ စတဲ့​အချက်​တွေဟာ ထိုင်း​နိုင်ငံအတွက် ​ဒေသတွင်း​စီး​ပွား​ရေး​ ဗဟိုချက် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့​ အား​သာချက်​တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့​အပြင် ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ကို တည်​ဆောက်စီမံခန့်​ခွဲခွင့်​ ရလိုက်ခြင်း​ဟာလည်း​ ဒီဆိပ်ကမ်း​ကတဆင့်​ အိန္ဒိယ ​ဈေး​ကွက်ကို ထိုင်း​ကုန်ပစ္စည်း​တွေ သယ်ယူပို့​ဆောင်စရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့​ တိုး​ချဲ့​တင်ပို့​နိုင်​တော့​မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ​ ထား​ဝယ်​ဒေသမှာ စက်မှုဇုန်​တွေ ထူ​ထောင်​ရေး​ဟာလည်း​ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာရှိတဲ့​ စက်မှုဇုန်​တွေ​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပေါ်လာတဲ့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ညစ်ညမ်း​မှုနဲ့​ ပြည်သူ့​ကျန်း​မာ​ရေး​ဆိုင်ရာ ပြဿနာ​တွေကို ​ဖြေရှင်း​ရှောင်လွှဲဖို့​ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုလုပ်ငန်း ​ရှင်​တွေ တ​နေ့​တခြား​ တိုး​ပြီး​ရင်ဆိုင်လာရတဲ့​ ထိုင်း​ပြည်သူ​တွေရဲ့​ ဆန့်​ကျင်မှု​တွေနဲ့​ ရလဒ်အ​နေနဲ့​ စက်မှုလုပ်ငန်း​တွေအ​ပေါ် ဥပ​ဒေအရ ပိုမိုတင်း​ကျပ်လာ ​နေတာ​ကြောင့်​ ထား​ဝယ်အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန်ဟာ ထွက်​ပေါက်တခု ဖြစ်လာလိမ့်​မယ်လို့​ ထိုင်း​အစိုး​ရက ရှုမြင်ထား​ပါတယ်။
ထား​ဝယ်​ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန် တည်​ဆောက်ခွင့်​ကို မြန်မာအစိုး​ရနဲ့​ အီတာလျံ-ထိုင်း​ကုမ္ပဏီတို့​ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး​ မကြာခင် ၂၀၁၀ ပြည့်​နှစ် နိုဝင်ဘာမှာ အဲဒီတုန်း​က ထိုင်း​ဝန်ကြီး​ချုပ် အဖိဆစ် ​ဝေ့​ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) က “တချို့​စက်ရုံ​တွေက ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ အ​ခြေချဖို့​ မသင့်​လျော်ပါဘူး​။ အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​ ဒီစက်ရုံ​တွေကို အဲဒီမှာ (ထား​ဝယ်မှာ) တည်​ဆောက်ဖို့​ ဆုံး​ဖြတ်ခဲ့​တာပါ” လို့​ သူ့​ရဲ့​ အပတ်စဉ် ရုပ်မြင်သံကြား​ မိန့်​ခွန်း​တခုမှာ ​ပြောကြား​သွား​ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လထဲမှာပဲ ထိုင်း​စက်မှုလုပ်ငန်း​အသင်း​ချုပ်ရဲ့​ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ တာနစ်ဆို ရတ် (Tanit Sorat) က “မြန်မာ​တွေက သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ပြဿနာ​တွေကို လျစ်လျူရှုထား​တုန်း​ပါပဲ။ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ကို ထိခိုက်​စေလို့​ ကမ္ဘာ့​တခြား​နေရာ​တွေမှာ တား​မြစ်ထား​တဲ့​ အကြီး​စား​စက်မှုလုပ်ငန်း​ကြီး​တွေအတွက် ထား​ဝယ်က အ​ဖြေတခုပါ” လို့​ AFP သတင်း​ဌာနနဲ့​ ​တွေ့​ဆုံ​မေး​မြန်း​ခန်း​တခုမှာ ​ပြောဆိုခဲ့​ပါတယ်။
ဒီ​ ပြောဆိုချက်​တွေအရ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်နဲ့​ လူ့​အဖွဲ့​အစည်း​ကို ထိခိုက်အန္တရာယ်ပြု​နေတဲ့​ စက်မှုလုပ်ငန်း​တွေရဲ့​ အ​ခြေအ​နေ ဘယ်​လောက်ဆိုး​ဆိုး​ရွား​ရွား​ ဖြစ်​နေသလဲဆိုတာ မှန်း​ကြည့်​နိုင်ပါတယ်။ (ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ အကြီး​ဆုံး​ မတ်တဖွတ် Map Ta Phut စက်မှုဇုန်အ​ကြောင်း​ ​ရှေ့​အပတ်​တွေမှာ ဆက်လက်​ဖော်ပြသွား​ပါမယ်။)
တတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ​ ထား​ဝယ်​ဒေသရဲ့​ သဘာဝအရင်း​အမြစ်​တွေ ထုတ်ယူသုံး​စွဲ နိုင်မှုမှာ မဟာဗျူဟာကျခြင်း​က ထိုင်း​နိုင်ငံအတွက် ပထမနဲ့​ ဒုတိယအချက်​တွေက ရည်မှန်း​ချက်​တွေ ​အောင်မြင်​ရေး​အတွက် အဓိကအ​ကြောင်း​ရင်း​ဖြစ်​နေပါတယ်။
တကယ်​တော့​ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ ထား​ဝယ်လို ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ စက်မှုဇုန် တွဲလျက်တည်​ဆောက်မယ့်​ မဟာဗျူဟာကျတဲ့​နေရာ ရှိသလို စီမံကိန်း​လည်း​ ​ရေး​ဆွဲ ထား​ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့​တောင်ဘက်စွန်း​ ​ကော့​သောင်း​မြို့​က​နေ ​တောင်ဘက်ကို ဆက်ဆင်း​သွား​ရင် ထိုင်း​နိုင်ငံ​တောင်ပိုင်း​က ဆာထုန်​ဒေသ (Satun Province) မှာ ပတ်ဘာရာ (Pak Bara) ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ (Southern Seaboard Development Project) ကို ထိုင်း​အစိုး​ရက ​ရေး​ဆွဲအ​ကောင်အထည်​ဖော်ဖို့​ ကြိုး​စား​ခဲ့​တာ နှစ်အ​တော် ကြာပါပြီ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ဒေသခံပြည်သူ​တွေရဲ့​ အပြင်း​အထန် ဆန့်​ကျင်ကန့်​ကွက်မှု​ကြောင့်​ အ​ကောင်အထည်မ​ဖော်နိုင်ဘဲ ရှိ​နေခဲ့​ပါတယ်။
ဒီအ​ခြေအ​ နေနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ ထိုင်း​အစိုး​ရရဲ့​ ကုန်သွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဟောင်း​တဦး​ လည်း​ဖြစ်၊​ အမျိုး​သား​စီး​ပွား​ရေး​နဲ့​ လူမှု​ရေး​ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​ ဘုတ်အဖွဲ့​ (NESDB) ရဲ့​ ဒါရိုက်တာတဦး​လည်း​ဖြစ်ခဲ့​တဲ့​ နာရုန်ချိုင်း​ အကရာစန်နီး​ Narongchai Akrasanee က “ဟိုတုန်း​က ကျ​နော်တို့​ Southern Seaboard နဲ့​ Pak Bara ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​အ ​ကြောင်း​ ​ပြော​လေ့​ရှိကြတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အခု​တော့​ အဲဒါ​တွေအား​လုံး​ကို ​မေ့​လိုက်ကြပါ​တော့​။ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ အဓိကရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံမှု​တွေဖြစ်တဲ့​ သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း​ကြီး​တွေ ထား​ဝယ်ကို ​သေချာ​ပေါက် ​ရွှေ့​ပြောင်း​ရ​တော့​မှာပါ။ ထိုင်း​ပြည်သူ​တွေက အဲဒီစက်မှုလုပ်ငန်း​ကြီး​တွေကို ဆန့်​ကျင်ကန့်​ကွက်​နေလို့​ ကျ​နော်တို့​ ဘယ်လိုမှ ​ရှေ့​ဆက်တိုး​လို့​မရတဲ့​ အ​ခြေအ​နေပါ” လို့​ ဘန်​ကောက်အ​ခြေစိုက် ​နေး​ရှင်း​ (The Nation) အင်္ဂလိပ်သတင်း​စာကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လထဲမှာ ​ပြောကြား​ခဲ့​ပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံဟာ သူ့​နိုင်ငံတွင်း​မှာ ဒီလို ညစ်ညမ်း​တဲ့​စက်မှုလုပ်ငန်း​တွေ ဆက်လက်တိုး​ချဲ့​ထူ​ထောင်သွား​ဖို့​ အခက်ကြုံ​နေလို့​ ထား​ဝယ်ကို မျက်စိကျတာဟာ အ​ကြောင်း​အချက်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ တခြား​မဟာဗျူဟာအကျိုး​စီး​ ပွား​တခုက​တော့​ တ​နေ့​တခြား​ လိုအပ်ချက်ကြီး​မား​လာ​နေတဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ စွမ်း​အင်လုံခြုံမှု ကို ဖြည့်​ဆည်း​ပေး​မယ့်​ မြန်မာပြည်က စွမ်း​အင်အရင်း​အမြစ်​တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ထား​ဝယ်စီမံကိန်း​က ဘယ်လို ဖြည့်​စွမ်း​ပေး​နိုင်ပါသလဲ။
ထား​ဝယ်​ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီး​ဆုံး​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သိုက် ကြီး​ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့​ မုတ္တမပင်လယ်​ကွေ့​က ရတနာနဲ့​ တနင်္သာရီကမ်း​ရိုး​တန်း​အလွန် အန်ဒမန် ပယ်လယ်ထဲက ရဲတံခွန်တို့​အကြား​မှာ ပထဝီအ​နေအထား​အရ မဟာဗျူဟာကျကျ တည်ရှိ​နေပါတယ်။ ဒီအချက်တခုတည်း​က အစဉ်တစိုက် ကြီး​ထွား​နေတဲ့​ နိုင်ငံရဲ့​ စွမ်း​အင် သုံး​စွဲမှုကို ဖြည့်​ဆည်း​နိုင်ဖို့​အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​တင်ပို့​မှုကို အား​ကိုး​ ​နေရတဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံကို ထား​ဝယ်စီမံကိန်း​မှာ ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံဖို့​ ဆွဲ​ဆောင်​နေတာပါ။
မုတ္တမပင်လယ်​ ကွေ့​ထဲက သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သိုက်​တွေမှာ ထိုင်း​နိုင်ငံက ဘယ်​လောက်များ​ ရင်း​နှီး​မြှုပ်နှံထား​သလဲဆိုတာ ​လေ့​လာကြည့်​ရ​အောင်ပါ။
ထိုင်း​ နိုင်ငံရဲ့​ အကြီး​ဆုံး​ရေနံကုမ္ပဏီစုကြီး​ရဲ့​ PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Ltd.) ကုမ္ပဏီရဲ့​ အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်မှာ တင်ထား​တဲ့​ အချက်အလက်​တွေအရ PTTEP ဟာ မုတ္တမပင်လယ်​ကွေ့​ထဲက သဘာဝ ဓာတ်​ငွေ့​ ရှာ​ဖွေထုတ်လုပ်​ရေး​ လုပ်ကွက်အမှတ် M3, M4, M7, M9 နဲ့​ M11 တို့​ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း​အပြည့်​ ပိုင်ဆိုင်ထား​ပြီး​ အဲဒီလုပ်ကွက်​တွေအား​လုံး​ရဲ့​ အနီး​ဆုံး​နေရာဟာ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ​အောက်ပါ​မြေပုံက ​ဖော်ညွှန်း​နေပါတယ်။
အီတာလျှံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့ Conceptual Plan ထဲက ရတနာနဲ့ ရဲတံခွန် ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေပုံ
ဒါ့​အပြင် ပြင်သစ်နိုင်ငံအ​ခြေစိုက် တိုတယ် (TOTAL) ​ရေနံကုမ္ပဏီကြီး​က တူး​ဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်​ ရထား​တဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​တွင်း​တွေရဲ့​ ၂၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း​နဲ့​ မ​လေး​ရှား​နိုင်ငံအ​ခြေစိုက် ပတ်ထရိုနပ်စ် (Petronas) ​ရေနံကုမ္ပဏီကြီး​က တူး​ဖော်ထုတ် လုပ်​နေတဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​တွေရဲ့​ ၁၉ ဒသမ ၃၁၇၈ ရာခိုင်နှုန်း​ကိုလည်း​ PTTEP က ပိုင်ဆိုင်ထား​ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့်​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သို​လှောင်ကန်​တွေ၊​ ဒီဓာတ်​ငွေ့​တွေကို အသင့်​သုံး​စွဲ နိုင်တဲ့​ အဆင့်​အထိ အရည်အဖြစ် သန့်​စင်​ပြောင်း​လဲမယ့်​ စက်ရုံ​တွေနဲ့​ ထား​ဝယ်​ရေနက် ဆိပ်ကမ်း​က​နေ ထိုင်း​နိုင်ငံ ကန်ချနပူရီခရိုင်အထိ ဓာတ်​ငွေ့​ပိုက်လိုင်း​ သွယ်တန်း​ တင်ပို့​ မယ့်​ အစီအစဉ်​တွေကို ​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​နဲ့​ အထူး​စီး​ပွား​ရေး​ဇုန်စီမံကိန်း​ကြီး​မှာ ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ မဟာဗျူဟာ အကျိုး​စီး​ပွား​တွေအဖြစ် ​ရေး​ဆွဲထား​ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ထုတ်လုပ်စရိတ် အကုန်အကျ သက်သာပြီး​ ထိုင်း​နိုင်ငံ တွင်း​ ​လောင်စာဆီ​ဈေး​နှုန်း​ မြင့်​တက်မှုကို အစိုး​ရအ​နေနဲ့​ အထိုက်အ​လျောက် ထိန်း​ထား​ နိုင်မှာဖြစ်သလို ​ရေနံချက်စက်ရုံ​တွေနဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သန့်​စင်စက်ရုံ​တွေ​ကြောင့်​ ​နောက်ဆက်တွဲဖြစ်​ပေါ်လာမယ့်​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ညစ်ညမ်း​မှုပြဿနာ​တွေ ထိုင်း​နိုင်ငံ မှာ တိုး​ပွား​မလား​အောင် ​ရှောင်ရှား​ရာလည်း​ကျပါတယ်။
ထိုင်း​ နိုင်ငံရဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သုံး​စွဲမှုဟာ တ​နေ့​တခြား​ မြင့်​မား​လာ​နေပါတယ်။ ထိုင်း​အစိုး​ရရဲ့​ စွမ်း​အင်မူဝါဒနဲ့​ စီမံကိန်း​ဆိုင်ရာရုံး​ EPPO (Energy Policy and Planning Office of Thailand) ရဲ့​ ကိန်း​ဂဏန်း​အချက်အလက်​တွေအရ လွန်ခဲ့​တဲ့​ ၁၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း​ မြန်မာနိုင်ငံက​နေ ထိုင်း​နိုင်ငံကို တင်သွင်း​ခဲ့​တဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​ ပမာဏဟာ ပထမ ၂ နှစ်ဖြစ်တဲ့​ ၁၉၉၈ နဲ့​ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တို့​မှာ တ​နေ့​ကို ကုဗ​ပေသန်း​ပေါင်း​ ၂ သန်း​ စတင်တင်သွင်း​ခဲ့​ပြီး​ ​နောက်ပိုင်း​နှစ်​တွေမှာ တဖြည်း​ဖြည်း​မြင့်​မား​လာပြီး​ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ တ​နေ့​ကို ကုဗ​ပေသန်း​ပေါင်း​ ၈၀၃ သန်း​အထိ တိုး​တက်ခဲ့​ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ ပြည်တွင်း​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​ထုတ်လုပ်မှုရဲ့​ ၂၆ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း​ ရှိပါတယ်။
Energy Policy and Planning Office (EPPO), Thailand
ထိုင်း​အစိုး​ ရရဲ့​ Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) က ထုတ်ပြန်ထား​တဲ့​ “Summary of Thailand Power Development Plan 2010 – 2030” စီမံကိန်း​အစီရင်ခံစာက ၂၀၁၀ ပြည့်​နှစ်မှာ နိုင်ငံတွင်း​ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​သုံး​စွဲမှု အမြင့်​မား​ဆုံး​ ၂၃၂၃၉ မီဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး​ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ၅၂၈၉၀ မီဂါဝပ်အထိ တိုး​တက်လာ မယ်လို့​ တွက်ချက်ခန့်​မှန်း​ထား​ပါတယ်။ အဲဒါ​ကြောင့်​ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ ထုတ်လုပ်ဖို့​အ တွက် သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​လိုအပ်ချက်ကလည်း​ မြင့်​မား​လာမယ်ဆိုတာ ခန့်​မှန်း​နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်း​ နိုင်ငံဟာ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​စွမ်း​အင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ ထုတ်လုပ်တဲ့​နေရာ မှာ အများ​ဆုံး​အသုံး​ချပြီး​ စက်မှုလုပ်ငန်း​က ဒုတိယ​နေရာလိုက်ပါတယ်။ EPPO ရဲ့​ ကိန်း​ဂ ဏန်း​တွေအရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား​ထုတ်လုပ်​ရေး​မှာ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သုံး​စွဲမှု ပမာဏဟာ တနိုင်ငံလုံး​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သုံး​စွဲမှု စုစု​ပေါင်း​ရဲ့​ ၆၈ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း​ (ကုဗ​ပေ ၂,၄၃၅ သန်း​) ရှိပြီး​ စက်မှုကဏ္ဍကသုံး​စွဲမှုမှာ ၁၀ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း​ (ကုဗ​ပေ ၃၈၇ သန်း​) ရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ လွန်ခဲ့​တဲ့​ နှစ် ၂၀ က ကိန်း​ဂဏန်း​ဖြစ်တဲ့​ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ထိုင်း​နိုင်ငံရဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​သုံး​စွဲမှုပမာဏနဲ့​ နှိုင်း​ယှဉ်ရင် ၆ ဒသမ ၇ ဆ ​လောက် မြင့်​မား​လာတာကို ​တွေ့​ရပါတယ်။
လာမယ့်​ နှစ် ၂၀ အတွင်း​ ကြီး​ထွား​လာမယ့်​ ထိုင်း​စီး​ပွား​ရေး​က စွမ်း​အင်သုံး​စွဲမှု လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်​ဆည်း​နိုင်ဖို့​အတွက် မြန်မာနဲ့​ လာအိုတို့​နဲ့​ သဘာဝဓာတ်​ငွေ့​ပိုက် လိုင်း​တွေ၊​ လျှပ်စစ်မဟာဓာတ်အား​လိုင်း​တွေကို သွယ်တန်း​တည်​ဆောက်ပြီး​ နိုင်ငံရဲ့​ စွမ်း​အင်လုံခြုံ​ရေး​ အာမခံချက် ရရှိ​ရေး​အတွက် ထိုင်း​အစိုး​ရအ​နေနဲ့​ မဟာဗျူဟာ​မြောက် ကြိုး​စား​ အ​ကောင်အထည်​ဖော်​နေတာ ထိုင်း​ စွမ်း​အင်မူဝါဒနဲ့​စီမံကိန်း​တွေအရ ​တွေ့​ရပါ တယ်။
ရှေ့​တပတ်မှာ ထိုင်း​နိုင်ငံက စက်မှုလုပ်ငန်း​တွေ​ကြောင့်​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ညစ်ညမ်း​မှု အ​ခြေအ​နေ​တွေကို ဆက်လက်တင်ပြသွား​ပါမယ်။
ဆန္ဒပြကိုယ်​တော်ဦးသောပါက နှင့် အင်တာဗျူး
Yeyint Kyaw (Face book)မှ...
၁၆-၁၁-၁၁ နေ့ ၊ ဆွမ်းစား အပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တရားပွဲ မစမီ မြစ်မခ သတင်းဌာန မှ အင်တာဗျုးခဲ့ သည်ကို ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြကိုယ်​တော်များ​ကို မန္တ​လေး​တွင် သီတင်း​သုံး​ခွင့်​မပြု
Published on November 17, 2011 by နေသွင်
မန္တ​လေး​မြို့​မှာ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​တရား​ပွဲလုပ်တဲ့​ သံဃာ ၅ ပါး​ကို မန္တ​လေး​မြို့​ပေါ်က ​ကျောင်း​တိုက်​တွေမှာ ဆက်လက် သီတင်း​သုံး​ခွင့်​ မပြု​တော့​ဘူး​လို့​ ဆန္ဒပြသံဃာ​တွေက ​ပြောပါတယ်။
ယခင်က သီတင်း​သုံး​တဲ့​ မန္တ​လေး​မြို့​ပေါ်က ရန်ကုန်​ကျောင်း​တိုက်မှာ ဆက်လက် သီတင်း​သုံး​ခွင့်​ မပြု​တော့​ဘဲ သံဃာ​တော်​တွေရဲ့​ ဇာတိနယ်​မြေဖြစ်တဲ့​ မုံရွာကို မနက်ဖြန် ​နေ့​ခင်း​ပိုင်း​မှာ ပြန်လည်ပို့​ဆောင်​တော့​မှာလို့​ ဆန္ဒပြကိုယ်​တော်တပါး​က မိန့်​ကြား​ပါတယ်။
“ဟုတ်တယ် ဦး​ဇင်း​တို့​ကို နက်ဖြန်​နေ့​လယ် ၁၂ နာရီကျရင် သူတို့​အစီအစဉ်နဲ့​ ကား​နဲ့​ပြန်ပို့​ပေး​မယ်​ပြောတယ်။ သာသနာ​ရေး​ ဝန်ကြီး​ဌာနက​နေ အဖွဲ့​အစည်း​ပေါင်း​စုံ အား​လုံး​က ပြန်ခိုင်း​တာပါ။ သံဃာ့​နာယကကို။ ဦး​ဇင်း​တို့​ပြန်ရမယ်​လေ။ မစိုး​ရိမ်ဆရာ​တော်ကြီး​က တာဝန်ယူပြီး​တော့​မှ ဦး​ဇင်း​တို့​ကို ပြန်ခိုင်း​တာ။ အား​လုံး​က တနယ်တည်း​ ဖြစ်​နေတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​ အား​လုံး​တူတူပဲ ပြန်ကြမှာ။”
မုံရွာကို​ရောက်ရင် ဖမ်း​ဆီး​တာ​တွေ မဖြစ်​အောင် မန္တ​လေး​ မစိုး​ရိမ်တိုက်​ဟောင်း​ ဆရာ​တော်ရဲ့​ ​ထောက်ခံချက်လက်မှတ်​တွေကို တ​စောင်စီ ထုတ်​ပေး​ထား​တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
သံဃာ ၅ ပါး​ဟာ အင်္ဂါ​နေ့​မနက်က မန္တ​လေး​ မဟာမြတ်မုနိ ဘုရား​ကြီး​ဝင်း​ထဲမှာ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​တရား​ပွဲ​တွေကို စလုပ်ခဲ့​တာဖြစ်ပြီး​၊​ ​နေ့​တွင်း​ချင်း​ မစိုး​ရိမ်တိုက်ကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​ခဲ့​ရပါတယ်။ အဲဒီ​နောက် မ​နေ့​က ​နေ့​ခင်း​ပိုင်း​က မစိုး​ရိမ်တိုက်မှာ တနာရီကြာ တရား​ဟောပြီး​နောက် ​ရေ​တော်ပိဋကပါလ ​ကျောင်း​တိုက်ကို ထပ်မံ​ပြောင်း​ခဲ့​ရပြီး​ ​နောက်ဆုံး​ မူလ​နေရပ်​တွေကို ပြန်ကြွကြဖို့​ ဖိအား​ပေး​ခံရတာပါ။
မ​နေ့​တုန်း​က​တော့​ သံဃာ​တော်​တွေရဲ့​ မူလ​တောင်း​ဆိုချက်ဖြစ်တဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​ အကျဉ်း​သား​တွေလွတ်​မြောက်​ရေး​၊​ ပြည်တွင်း​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​၊​ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်​ဖော်ခွင့်​ရ​ရေး​ အချက်​တွေပါဝင်တဲ့​ ​တောင်း​ဆိုချက်​တွေကို ဗဟိုသံဃာ့​ မဟာနာယကအဖွဲ့​နဲ့​ အစိုး​ရအဖွဲ့​ကို တရား​ဝင်လမ်း​ကြောင်း​က​နေ ​ပေး​ပို့​သွား​ဖို့​ မန္တ​လေး​မြို့​ပေါ်က နာယက ဆရာ​တော်​တွေကို စီစဉ်​ပေး​ခဲ့​တယ်လို့​ ဆန္ဒပြကိုယ်​တော်​တွေက မိန့်​ကြား​ပါတယ်။
မနက်ဖြန် မုံရွာကို ပြန်မကြွခင်အထိ အခု​နောက်ဆုံး​သီတင်း​သုံး​နေတဲ့​ ​ရေ​ကျော်​ကျောင်း​တိုက်မှာပဲ ဆက်လက် သီတင်း​သုံး​ခွင့်​ပြုထား​တယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ကြာသပတေး, 17 နိုဝင်ဘာ 2011
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ကျခံနေရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဒီကနေ့ နေ့ခင်းက ကျိုင်းတုံကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို လေယာဉ်နဲ့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် ဘယ်ထောင်ကို ပို့မယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး နယ်ဝေးထောင်တွေမှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကို မိသားစုနဲ့နီးစပ်ရာထောင်တွေဆီ စတင်ပြောင်းရွှေ့ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့ မကြားသိရသေးပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို မိသားစုဝင်တွေ၊ အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကိုယ်တော် ဦးဂဘမ္ဘီရ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မနီလာသိန်းတို့ကို နယ်ဝေး ထောင်တွေကနေ စတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာက ဒီကနေ့မှာတော ကျိုင်းတုံထောင်က ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဒီကနေ့ ကျိုင်းတုံထောင်က ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူရဲ့အမဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျိုင်းတုံက မိတ်ဆွေတဦးပြောတာကတော့ လေယာဉ်နဲ့ပါသွားပြီလို့တော့ ပြောတယ်။ လေယာဉ်က ၁၂ ခွဲထွက်တယ်တဲ့။ သူကိုပို့တာ လေဆိပ်လည်းအရောက် လေယာဉ်လည်းအရောက် ချိန်ကိုက်ပဲတဲ့။ တန်းတင်တယ်တဲ့ အဲလိုပြောတာ။ ရန်ကုန်လေယာဉ်ပဲပေါ့။ ဟဲဟိုးဝင်အုံးမယ်တော့ ပြောတယ်။ ဒီလေယာဉ်က။ လေယာဉ်က ရန်ကုန်လာမယ့် လေယာဉ်ပဲပေါ့။ သူ့ကြည်လိုက်တာ တယောက်တည်းပဲ တွေ့တယ်တဲ့။ Leather ဂျာကင်လေး ၀တ်သွားတာ တွေ့တယ်တဲ့။ လက်ထိပ်တွေဘာတွေတော့ မခတ်ထားပါဘူးတဲ့။ မိတ်ဆွေက လှမ်းမြင်လိုက်တာပြောတာ”
ဒီလိုထောင်ပြောင်းရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေက မိသားစုတွေကို တစုံတရာအကြောင်းကြားတာ မရှိဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ရန်ကုန်ကနေ သရက်ထောင်ကို ပြောင်းမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ သီးခြား အတည်ပြုချက်တော့ မရသေးပါဘူး။
ကျိုင်းတုံထောင်မှာ နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့အခြားအကျဉ်းသား ၄ ဦးကို မနေ့က ဆေးစစ်ချက်ယူတာ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒီကနေ့တော့ ကိုမင်းကိုနိုင်တယောက်တည်းကိုပဲ ထောင်ပြောင်းတာရှိတယ်။ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတချို့ကိုလည်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ ကျိုင်းတုံထောင်က ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါတယ်။
မိုင်းဆတ်ထောင်ထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ကိုကိုကြီးကို ထောင်အပြောင်းအရွှေ့ရှိမရှိ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညီဖြစ်သူ ကိုအောင်ထွန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“မိုင်းဆတ်ကို ကျနော်တို့ ဖုန်းဆက်တုန်းကတော့ ကိုင်တာမရှိဘူး။ အိမ်ကိုတော့ အကြောင်းကြားတာမျိုး မရှိဘူးပေါ့။ ကျနော်တို့လည်း ဘာမှ မကြားရသေးဘူး။ စောင့်ကြည့်နေတာပဲ။ တချို့လူတွေတော့ ကြားနေတာပေါ့။ မနီလာသိန်းတို့ ဘာတို့ ပြောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ကြားနေတာပေါ့”
VOA က မိုင်းဆတ်ထောင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ ကိုကိုကြီးနဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ အဲဒီမှာပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းတဦး ပြောပါတယ်။
ကသာထောင်မှာကျခံနေရတဲ့ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်သတင်းနဲ့ပ တ်သက်လို့တော့ ဘာမှ မကြားရသေးကြောင်း အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မယ်ဆို သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပြီး မလွတ်လာသေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက သူ့ခံစားချက်ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျမကတော့ လွှတ်မယ်ဆိုလည်း တခါတည်းလွှတ်လိုက်တာ ကြိုက်တယ်ပေါ့။ ဟိုတနေရာပြောင်း ဟိုတနေရာပြောင်း ပြောင်းပြီးတော့ကော လွှတ်ဖို့ဆိုတာက ဘယ်လောက်ကြာအုံးမှာလဲ။ အဲဒါက ရှိသေးတယ်။ ၁၀ ရက်နေ့တို့၊ ၁၄ ရက်နေ့တို့ ပြောနေကြတာ။ လူတွေကလည်း လွှတ်စေချင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ပြောကြသလားတော့ မသိပါဘူး။ မိသားစုတွေကလည်း မျှော်လင့်-မျှော်လင့်၊ မပါ- မပါဆိုတော့ အဲလိုပဲ မျှော်ရ မျှော်ရတာနဲ့ပဲ အားကုန်တယ်ပေါ့နော်။ အသက်ကလည်းကြီးဆိုတော အားလျော့တာပေါ့"
အခြား ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမြအေးနဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ ထောင်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတော့ မကြားသိရသေးပါဘူး။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက လောင်စာဆီဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ဝေးလံတဲ့ ထောင်တွေဆီ အပို့ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဝေးလံတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မိသားစုနဲ့ နီးရာထောင်တွေကို ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့က X20 ရေကစားမဏ္ဍပ် ဗုံးပေါက်ကွဲတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာကြောင့် အဖမ်းခံရတဲ့ ကိုစည်သူဇေယျကိုတော့ မနေ့က မိသားစုနဲ့ ဝေးလံတဲ့ ဟင်္သာတ ထောင်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇေယျကိုလည်း သီပေါထောင်ကို ပို့ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလ ၁၂ ရက်နေ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေကို ထပ်မံလွှတ်ပေးဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီကို အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်အရ လွတ်ငြိမ်းခွင့် မပေးနိုင်ရင်လည်း မိသားစုနဲ့နီးရာ အကျဉ်းထောင်တွေကို ရွှေ့ပေးဖို့ အတွက်လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမတ်များဖြင့် လွှတ်တော် ခေါ်ယူနိုင်ရေး ဟူသော ရည်ရွယ် ချက်နှင့် NLD
နှင့် ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ဇိုမီး၊ ကိုးကန့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၊ တသီးပုဂ္ဂလအမတ်များဖြင့် CRPP ကို ၁၉၉၈ ခု စက်တင်ဘာတွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။
ဇိုမီး အမျိုးသား ကွန်ကရက်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်က CRPP ကို “တခြားသင့်တော်တဲ့ နာမည် ယူပြီးတော့ ပြောင်း
အာဆီယံ ညီလာခံမှာ မြန်မာချိန်ခွင်လျှာညှိ
By featured, ဝေမိုး on November 17, 2011 6:32 pm
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပသည့် အခမ်းအနား စင်မြင့်ထက်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည့် အာဆီယံ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို တွေ့မြင်ရစဉ်။ AFP PHOTO / POOL / ENNY NURAHENI
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်လာရာကနေ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်လာပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အကောင်အထည် ဖော်လာတဲ့အတွက် အခုလို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိနေတာ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ချို့ကို လွှတ်ပေးတာတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အပြောင်းအလဲဟာ လုံလောက်မှု မရှိသေးဘဲ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေလည်း ဆက်လက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မပေးဖို့ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ နာတာလီဂါဝါ ပြောတာက - မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ အခုလို အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ တာဝန်ယူနိုင်ဖို့ အတွက် အခြေခံကောင်းတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုတာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင် အားလုံးက လက်ခံ သဘောတူ ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေဟာ အများမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဆင့်ထိ မရောက်ရှိသေးပေမဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ အနေနဲ့ မြင်တာက မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိ အပြောင်းအလဲတွေဟာ လက်ခံလောက်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်လို့ မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ နာဂျစ် ရာဇတ်က ပြောပါတယ်။ အခုလို အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို မြန်မာနိုင်ငံ ရရှိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလီမြို့မှာ သတင်းသွားရောက် ယူနေတဲ့ RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးခင်မောင်စိုးက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်ကို ဘာလီမြို့မှာ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။ အသံဖိုင်ယူရန်။
By featured, ဧရာဝတီ on November 17, 2011 5:27 pm
ယနေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး အခမ်းအနား(ဓာတ်ပုံ - AP)
ယင်း ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာကို အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ အဖြစ် တရားဝင်ကြေညာရန်လည်း ရှိနေသည်။
မြန်မာကို အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ပေးရေး ထိပ်သီးများ အတည်ပြု
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ASEAN ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို တာဝန်ပေးအပ်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီတာဝန်ပေးအပ်ရတဲ့ တိုင်းပြည်တခုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရတိုးတက်မှုလိုမျိုး တာဝန်ယူမှုတွေလည်း ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်းမှာ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းက ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက ရောက်နေတာမို့လို့ အပြည့်အစုံ အခုလို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရော၊ မြန်မာပြည်တွင်းကပါ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ မြန်မာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးရေး ကိစ္စ ဒီကနေ့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့လို့ ပြောရမှာပါ။ အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ အိမ်ရှင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မာတီနာတာလီဂါဝါက အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးဖို့ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ အခုလို အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေကို လက်ခံရရှိပြီးတော့ တညီတညွတ်တည်း အလေးအနက်စဉ်းစားပြီးတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးရေး တရားဝန်ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုပေး လိုက်တာ ဆိုတာကို ကျနော်ပြောပြနိုင်ပါတယ်- လို့ ပြောပြသွားတာပါ။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာ ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဝတ္တရားကျေကျေပွန်ပွန်နဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီနာတာလီဂါဝါက အခုလို ပြောပါသေးတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ်တာဝန်တခု တိုးလာနေပါပြီ။ အာဆီယံရည်မှန်းချက်တခုဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံမိသားစု၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို စုစည်းထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဦးဆောင်ဦးရွက် လမ်းပြရမှာဖြစ်လို့ပါပဲ-တဲ့။ အခု အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့ တရားဝင်လည်းဖြစ်သွားပြီ၊ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် ကျနော်တို့အားလုံး စောင့်စားခဲ့ကြသလို အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဘယ်လိုကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်သွားမှာလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်သွားကြမှာပါလို့ - ပြောဆိုသွားတာပါ။
အဲဒီအစည်းအဝေးအပြီးမှာ သမ္မတရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်ကနေပြီးတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူရတာထက် တာဝန်တွေပိုပြီး ကြီးလေးလာတယ်လို့ မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုတာကို ဖောက်သည်ပြန်ချပါတယ်။ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ တာဝန်ယူထားရမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုပြီး ဝင်ဆန့်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ပိုပြီးလုပ်ပြဖို့လိုတယ်လို့လည်း အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်လို့ ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောပြပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုးတက်ဖို့ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်ထွန်းအောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက တွန်းအားပေးတာ ခံနေရတဲ့အချိန်မှာ မနက်ဖြန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂၀ ထပ်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ သမ္မတရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးစစ်အေးက ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့ အကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး”
“မဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တာက သွားတဲ့ process ကတော့ ဒီဘက်က လွှတ်တော်က အပိုင်းရယ်၊ နောက်တခါ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီ အပိုင်းရယ်၊ ပြီးတော့မှ သမ္မတကြီးအပိုင်းရယ်၊ ဒီလိုကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်”
သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်နဲ့ ဦးစစ်အေးတို့ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အတူ ဒီ ထိပ်သီးညီလာခံကို လာပြီးတက်ရောက်နေကြတာပါ။
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူလာရတဲ့အချိန်နဲ့ အာဆီယံလူ့ဘောင် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်း စုစည်းထူထောင်ဖို့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရမယ့် အချိန်တွေ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် အာဆီယံမိသားစုကြီးရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိလာအောင်၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာတွေ မခံရအောင် ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေကို မြန်မာအစိုးရက ထမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း အများက အကဲခတ် သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ
ခရစ်စတင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၅၅ မိနစ်
ဘာလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ လာမည့် ၂ဝ၁၄ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် နိုဝင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့တွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များက သဘောတူကြောင်း အတည်ပြုလိုက်ပြီ
ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေး (နိုင်ငံရေး)မှ ဦးကိုကိုလှိုင်က သတင်းထောက်များကို ပြောကြား လိုက်သည်။
ကြာသပတေးနေ့က ကျင်းပနေသည့် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် ထိုကဲ့သို့ အတည်ပြု
ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေးအတွက် ကန့်ကွက်သူ မရှိကြောင်း သိရသည်။
"ဒီလို ဥက္ကဌရာထူး ခန့်အပ်ခံရတာဟာ မြန်မာအစိုးရတင် မကဘူး။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အောင်ပွဲ
ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောသည်။
ထိုအတွက် ခေါင်းဆောင်များ အတည်ပြုကာ လက်မှတ်ရေးထိုးကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်
သတင်းထောက်များကို ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အခွင့်အရေးရှိကြောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရန် အရည်အချင်း ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ခေါင်းဆောင်များက အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများက ထိုအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကို ပေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးနောက် ယခု ခေါင်းဆောင်များ၏ အတည်ပြုချက်အရ ၂ဝ၁၄ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Marty Natalegawaသည် မြန်မာနိုင်ငံကို အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး
ပေးရေး မပေးရေး ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အချက်အလက် စုဆောင်းသောအားဖြင့် အစိုးရ အရာရှိများ၊ အတိုက်အခံ
နိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် အောက်တိုဘာလက မြန်မာ
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန၏ ဇူလိုင်လက သတင်းတပုဒ်တွင်လည်း မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး လက်ခံရေး အတွက် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် အဆောက်အအုံများ၊ အားကစားကွင်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သည် များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရက ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၂၀ခန့် ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ရယူရန် အခွင့်အရေး ရှိခဲ့သော်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် အဝေဖန်ခံရကာ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ မရဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။
အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို သာမန်အားဖြင့်၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှသာ ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း လာအိုနိုင်ငံက အလှည့်ကျော်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌ နေရာရယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
အာဆီယံ ထပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီမြို့ရှိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရောက်ရှိလာသည်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်က တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ
အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်ပါ ပေးသွားတဲ့ ရင်ငြိမ်းပွင့်
FACE BOOK Yinnyein Pwint (ရင်ငြိမ်းပွင့်) စကာင်္ပူမှာတိုက်အမြင့်ကကျပြီးကွယ်လွန်ပါတယ်။ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ရင်ငြိမ်းပွင့် Face book ကချစ်စရာပုံလေးတွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုဖေါ်ပြချက်အချို့ပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/17/2011 1 အကြံပြုခြင်း
NLD Youth Statement - လူငယ်လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ ကြေညာ...